Tsy misy fahamarinana ao Népal satria politisiana voampanga ho namono olona no voafidy ho filohan’ny antenimiera · Global Voices teny Malagasy
Mbola miandry ny rariny hatrany ireo niharan-doza tamin'ny ady an-trano
Nandika (fr) i Jocelyne Gurung
Voadika ny 27 Febroary 2020 5:19 GMT
Agni Prasad Sapkota. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Nepal News nivoaka tao amin'ny YouTube.
[Raha tsy misy filazàna mifanohitra, dia mankany aminà pejy amin'ny teny anglisy ny rohy rehetra]
Ao Népal, lasa manampahaizana manokana amin'ny fandosirana ny fitsaràna daholo ireo politisiana mitàna andraikitra ambony: ny ohatra tsara indrindra amin'izany dia ny toerana maha-filohan'ny Antenimeram-pirenena, izay tazonin'i Agni Prasad Sapkota, olona voampanga aminà resaka vono olona. Izy no nisolo ny filoha teo aloha, izay voampanga taminà resaka fanolanana ihany koa, ny 26 Janoary. Efatra ambinifolo taona taorian'ny nitsaharan'ny ady an-trano izay naharitra folo taona [fr], toa mbola ho sarotra ho an'ny ankamaroanireo niharan-doza tamin'iny fifandonana iny ny hahazo rariny.
Fahatafintohinana eny anivon'ireo mpiaro zon'olombelona
Efa nandritra ny taona10 mahery, tsy nitsahatra ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ny nitaky ny Fitsaràna Antampony ao Népal hampanao fanadihadiana tsy miankina momba an'i Sapkota, mpikambana ao amin'ny kaomity maharitry ny Antoko kaominista Nepaley izay eo amin'ny fitondràna amin'izao fotoana izao, ary voampanga ho namono nahafaty ilay talen-tsekoly, Arjun Lama.
Fa na eo aza ny hamafin'ity fiampangàna ity, tsy mitsahatra ny mitombo ny lazan'i Sapkota ao anatin'ny antokony. Ny 26 Janoary, voafidy izy ho filohan'ny antenimieram-pirenena, vely kanonta ho an'ny vinavina hisian'ny rariny sy ny fahamarinana nampanantenaina ireo an'arivony maro niharan-doza tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary ireo fikambanana manaramaso ny fanajàna ireny zo ireny.
Miaraka amin'ny fahalanian'i Agni Sapkota ho filohan'ny antenimiera, toy ny ompain'ny governemanta nepaley tsotra izao ireo vondrona mpiaro zon'olombelona sy ireo niharan-doza tamin'ny fifandonana maôista.
— Anup Kaphle (@AnupKaphle) 26 Janoary 2020
Nataon'io fanapahankevitra io ho tsinontsinona ny fanambaràna iray tamin'ny 25 Janoary niarahan'ny Amnesty International, ny Kaomisiona iraisampirenen'ireo mpahay lalàna (CIJ), ny Human Rights Watch ary ny TRIAL International, nanaingàna ny Antoko kaominista nepaley (PCN) izay eo amin'ny fitondràna mba hamerina hijery ny fanendrena an'i Sapkota raha tsy mbola misy fanadihadiana lalina iray tsy miankina vita tsara aloha.
Ny 27 Janoary, ampitson'ny nanendrena an'i Sapkota, efa ho roambinifolo mahery ireo mpikatroka nosamborin'ny polisy, isan'ireny ireo mpikambana avy amin'ny Amnesty International ao Népal. Navotsotra ry zareo ireo – na lahy na vavy – nony farany, efa taty aoriana be tamin'io andro io.
Nosamborina nanditra ny fihetsiketsehana nanoherana ny fanendrena an'i Agni Sapkota ho filohan'ny antenimiera federaly ireo Nepaley mpiara-miasa aminay, isan'izany ny talen'ny Amnesty International ao Népal sy olona roa mpikambana fahiny tao amin'ny filankevi-pitantananal.
Tsy heloka bevava ny fanaovana hetsika am-pilaminana.
— Amnesty International (@amnesty) 27 Janoary 2020
Ilay tantara malaza ratsy momba ny Arjun Lama
Jona 2005, Sapkota no voampanga ho atidoha nikotrika ny fakàna an-keriny sy ny famonoana an'i Arjun Lama, talen-tsekoly iray tao an-toerana. Tamin'izany fotoana izany, Sapkota dia mpikambana tao amin'ny kaomity maharitry ny Antoko kaominista nepaley (afovoany maôista), notarihan'i Pushpa Kamal Dahal (antsoina hoe “Prachanda”), endrika iray fantadaza amin'ny polika nepaley, izay noheverina ihany koa ho toy ny mpitarika ny ady an-trano.
Rehefa avy in-droa nitàna toerana praiminisitra, i Prachanda ankehitriny no filoha mpiara-mitantana ny antoko eo amin'ny fitondràna, ny antoko kaominista nepaley izay nandray anjara betsaka tamin'ny nahalany an'i Sapkota. Sady izao, toa olona ambany fiarovan'i Prachanda i Sapkota : na teo aza ireo fitarainana napetrak'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, dia afaka nitazona tsara ny toerana politikany nitantana ny ministeran'ny fampahalalambaovao sy ny fifandraisana i Sapkota tamin'ny 2011, avy eo lasa minisitry ny ala sy ny fikajiana ny tany tamin'ny 2015 hatramin'ny 2016.
Tetsy andaniny kosa, nofy ratsy ny fiainana ho an'i Purnimaya Lama, vady navelan'i Arjun Lama, : hatramin'ny 2005 izy no nitolona nanandrana ny hahatakatra izay nanjo ny vadiny. Raha tsy nisy ny fanohanan'ireo fikambanana avy ao an-toerana sy ny iraisampirenena mpiaro zon'olombelona, ary ny didy iray avy amin'ny Fitsaràna Antampony, tsy vitany ny nandresy lahatra ny polisin'ny distrika nitondràna ny vadiny mba hanao ny tatitra voalohany fampahafantarana (First information Report) tamin'ny 2008. Tamin'izay fotoana izay, efa telo taona sahady no nanjavonan'ny vadiny.
Fa mbola ratsy kokoa, natsahatra ny raharaha Arjun Lama nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny parlemanta, ka nahafahan'i Sapkota niakatra amin'ny toerana vaovao misy azy na teo aza ireo fanoherana nataon'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona:
Asehon'ny fahalanian'i Agni Sapkota ho eo amin'ny toerana maha-filohan'ny parlemanta nepaley azy ny antony ilàna ny fisian'ny dingam-pitsaràna tetezamita azo itokiana ao Nepal. Taona sivy aty aoriana, tsy mbola miova ny hafatray.
- UN Human Rights (@UNHumanRights) 28 Janoary 2020
Araka ny Amnesty international ao Népal, ny Febroary 2020 no fihainoana manaraka.
Kolontsaina iray anjakan'ny tsimatimanota
Na mitodika any amin'i Sapkota aza ny mason'ireo mpanara-baovao rehetra, tsy inona izy fa kodia iray ao anatina rafitra iray ahitàna olona maro efa nanana rakitra tena tsy azo itokiana amin'ny resaka fanajàna zon'olombelona.
Avy any amin'ilay filoha fahiny nitondra ny parlemanta, Krishna Bahadur, voampanga ho nanolana, ka hatramin'ireo fanambaràna feno fihantsiana sy mampitroatra nataon'i Prachanda, mandalo amin'ireo tsindry atao amin'ireo vehivavy manampahaizana mba hitondra azy ireny hankany amin'ny fametrahana fialàna, dia mivandravandra fa manamafy ny kolontsain'ny tsimatimanota mba ho amin'ny tombontsoan-dry zareo ireo politisiana manana toerana ambony ao Nepal.
Eny tokoa, Prachanda dia nanambara tao anaty bitsika iray fa vonona izy ny hijoro ho tomponandraikitra tamin'ireo fahafatesana niisa 5 000 tamin'ny 12 000. Fanambarana nitranga taorian'ny fanehoankeviny tamin'ny taona lasa izay nanaovany fanamby tamin'ireo mpanenjika azy mba hitondra azy hiatrika ny Fitsaràna Iraisampirenena misahana ny Heloka Bevava [fr] any La Haye, ka hiverenany amim-boninahitra ho toy ny ‘maherifo’, hoy ny fanambaràny feno fihantsiana.
Ary satria ny safidin'i Prachanda nitodika tany amin'ny Sapkota mba ho filohan'ny parlemanta, voatery nametraka fialàna ny iray tamin'ireo vehivavy mpifaninana tena nanan-danja, Shiva Maya Tumbahamphe (avy ao amin'ny antoko misy an'i Sapkota ihany, na dia azo ambara ho sampana iray nihataka fahiny aza, ny CPN-UML), namela ny làlana ho malalaka ho an'i Sapkota. Mampahatsiahy antsika izany fa ao Nepal, tsy ny fahaizana fa ny fanànana mpiahy no manana ny toerany sy manjaka :
Miverina indray, noporofoin-dry zareo mpitondra fa eo fotsiny mba ho an'ny antokony ry zareo fa tsy ho an'ny firenena akory. Natolotra ho filohan'ny parlemanta i Agni Sapkota, voampanga ho namono olona. Ompa iray atao an'ireo vehivavy sy ireo niharam-doza tamin'ny fifandonana. #Nepal
— Subina Shrestha (@ShresthaSubina) 19 Janoary 2020
Na mahavaky fo toy ny inona aza izany, tsy afaka lavina intsony ny zavamisy izay iainana ny tsimatimanota isanandro vaky. Na nosoniavin'ireo maôista aza ilay Fifanarahana fandriampahalemana tamin'ny 2006 miaty fepetra iray tena iankinan'ny ain-dehibe ho entina manao fanadihadiana ny anjara noraisin-dry zareo tany anatin'ireo famonoana tsy nandalo fitsaràna, toa feno fitaka tanteraka io fampanantenana io. Sady izao, valo taona be izao no nilaina hananganana kaomisiona roa, ny kaomisionan'ny fahamarinana sy ny fampihavanana ary ny kaomisiona mpanadihady momba ny fanjavonan'ireo olona marobe, tafatsangana tamin'ny 2015. Talohan'izany, tamin'ny 2013 ny governemanta dia nandany didim-pitondràna iray nikendrana hanomezana fahefana midadasika ho an'ireo kaomisiona mba hahafahany mandray fanapahankevitra ao anatin'ny faritry ny lalàna, mba handrisihana mankany amin'ny famelankeloka an'ireo nahavita fanitsakitsahana mahatsiravina ny zon'olombelona.
Na tsy nankatoavin'ny Fitsaràna Antampony aza izy io, satria tsy araka ny lalàna sy mifanohitra amin'ny fenitra iraisampirenena, ny vakiteny farany nolanian'ireo kaomisiona roa dia mametraka ihany fepetra tena mitovitovy amin'izany. Ary mba ho fandetehana lalindalina kokoa ny fantsy, dia antoko roa izay, tanaty efitrano nihidy, no nanendry ireo mpikambana manokana avy tao aminy.
Ireo niharan-doza odian-tsy hita ao Népal
Ny fanabantiana ireo niharan-doza tamin'iny fifandonana feno herisetra iny dia votanisa amin'ny fomba maharary ao anatin'ireto tenin'ity mpikatroka ho an'ny zon'olombelona ity.
Tsy misy politikam-piarovana ireo vavolombelona. Dingana fotsiny eo ambany fitantanan'ireo nanatanteraka ny heloka io ary tsy mijery afa-tsy izay tombontsoany fa tsy ny an'ireo niharan-doza.
Maloka ny hoavy ho an'ireo an'arivony maro niharan-doza tamin'ny ady an-trano tao Nepal mikatsaka ny rariny sy ny marina ho an'ny ankohonan-dry zareo sy ny havany.
Hatreto, i Purnimaya Lama, izay manao fijoroana vavolombelona ato anatin'ity lahatsary ity, tsy mbola mahafantatra velively izay nanjo ny vadiny sy izay antony namonoana azy, ary ny toerana nandevenana azy:
Ary raha ny fahitàna azy dia tsy ho fantany mandrakizay.